ဆင်းမ်ကတ် စရောင်းချိန်တွင် မြို့ကြီးများ၌သာ သုံးနိုင်မည်ဟု တယ်လီနောဆို
6/06/2014 06:03:00 PM mobile-phone-news
ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအဖြစ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရထားသည့် တယ်လီနောက စက်တင်ဘာလတွင် ဆင်းမ်ကတ်များ စတင်ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး စတင်ရောင်းချချိန်၌ ရန်ကုန်မြို့တော်၊ မန္တလေးမြို့တော်နှင့် နေပြည်တော် အပါအဝင် မြို့ကြီးများတွင်သာ သုံးစွဲနိုင်ဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာထံမှ သိရသည်။
“တာဝါတိုင်တွေ ပြီးလို့ ကွန်ရက် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ သုံးနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ပိုများလာမယ်။ အချိန်တော့ နည်းနည်းပေးရမယ်” ဟု တယ်လီနောမြန်မာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ပိုမိုလွှမ်းခြုံနိုင်ရန် ငါးနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တာဝါတိုင်ပေါင်း ၈၀၀၀ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr.Petter Furberg က ပြောကြားသည်။
ဆင်းမ်ကတ်များ စတင်ရောင်းချချိန် စက်တင်ဘာလ မတိုင်မီတွင် တာဝါတိုင်ပေါင်း ၁၀၀၀ ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ကုန်တွင် တာဝါတိုင် ၂၄၀၀ ခန့် အပြီးတည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် ၂၀၀၀၀ ခန့် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက တာဝါတိုင် ၂၀၀၀ ခန့်သာ တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ အချိန်ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
တယ်လီနောမြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိန္ဒိယအခြေစိုက် Apollo Towers နှင့် စင်ကာပူအခြေစိုက် Irrawaddy Green Technology တို့ကို ရွေးချယ်ထားသည်။
“စရောင်းတဲ့အချိန်မှာ မြို့ကြီးတွေပဲ ရမယ်ဆိုတော့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နေတဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ ဘာမှမထူးပါဘူး။ စောင့်လက်စနဲ့ ဆက်စောင့်ရဦးမှာပေါ့။ လူတွေက အရမ်းမျှော်လင့်နေကြတော့ ဆင်းမ်ကတ် စရောင်းတာနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ရမယ် ထင်နေကြတာ” ဟု ကွန်ပျူတာပညာရှင် ဦးရဲဝင့်အောင်က ဆိုသည်။
အခြားဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် အော်ရီဒူးကုမ္ပဏီကလည်း သြဂုတ်လ ဆင်းမ်ကတ်များ စတင်ရောင်းချချိန် မတိုင်မီ တာဝါတိုင် ၄၀၀ ခန့် အပြီး တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ကုန်တွင် တာဝါတိုင် ၁၀၀၀ ခန့် ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်မည်ဟု ဆိုထားသည်။
ရဲချုပ်နဲ့ တိုင်းရဲမှူးဖတ်ဖို့ ပေးစာ
5/18/2014 03:11:00 PM complaint-letter
ဓားထောက် အဓမ္မ ပြုကျင့်တဲ့ အမှုတခုကို အခုထိ ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူသေးတဲ့ အတွက် ရဲချုပ်နဲ့ တိုင်းရဲမှူး တွေကို တာဝန်သိပြည်သူတဦးက ပေးပို့ထားတဲ့ ပေးစာတစောင် ဧရာဝတီ က လက်ခံရရှိ ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ်နှင့် တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့သိရှိစေရန်
အကြောင်းအရာ။ ။ ဓါးထောက် ခြိမ်းခြောက်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်သည့်အမှုအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ဆေးအရေး ယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် အပေါ် အထက်လူကြီးမင်းများ သိရှိအောင်တင်ပြခြင်း။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်အောင်မြို့နယ် ကြက်သွန်းခင်း အုပ်စု-ကျေးရွာနေ အမျိုးသမီးတဦးကို ၁၃၇၅ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လ တွင် မိဘများခရီးသွားစဉ် နေအိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်းရှိသည့်အချိန် ည (၁၁)နာရီ အချိန်တွင် တစ်ရွာ တည်းနေသူတဦးက ဓါးထောက်ခြိမ်းခြောက်ပြီး အလိုမတူဘဲ သားမယား အဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။
၄င်းအဓမ္မပြုကျင့်သည့်ကိစ္စအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြန်အောင်မြို့နယ်၊ အင်ပင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ တိုင်တန်းခဲ့သော်လည်း ယနေ့(၁၇-၅-၂၀၁၄)အထိ အမှုအား ဥပဒေနှင့်အညီ လက်ခံဖွင့်လှစ် အရေးယူ
ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဥပဒေအကာကွယ်မဲ့မှုများ အခက်ခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေနေရ သည့်အကြောင်း လူကြီးမင်းများ သိရှိအောင် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ကိုထွန်းထွန်း ၀၉ ၄၂၂၅၄၂၁၆၅
5/16/2014 12:09:00 PM strange-news world-news
အသက် ၄ နှစ်အရွယ် ဂျယ်ရမီလေးဟာ စက်ဘီးစီးနေတုန်း ခွေးတကောင်က ဝင်ကိုက်ဆွဲတာကို သူ့အိမ်က သတ္တိခဲ ကြောင်က ဝင်ကယ်ဆယ်လိုက်တာကို စီစီတီဗွီ ကင်မရာက မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ဘိတ်ကာဖိးလ် အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ အခုလို ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ခွေးဟာ ကား ကို အကာအကွယ်ယူခြောင်းမြောင်းက ဂျယ်ရမီလေးကို ဝင်ကိုက်ပြီး ဆွဲခါကာ မြေကြီးပေါ် လှဲချပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကို တာရာ လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျယ်ရမီတို့ အိမ်က ကြောင်က ဝင်ခုန်အုပ်ပြီး ခွေးကို တိုက်ခိုက်ကာ ဂျယ်ရမီလေး ကို ကယ်တင်လိုက်တာပါ။
ဒီအချိန် မိခင်ဖြစ်သူက အပြေးအလွှားရောက်လာခဲ့ပြီး ခွေးထပ်မလာအောင် ခြောက်လှန့်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဒီစီစီတီဗွီမှတ်တမ်းကို ဂျယ်ရမီ ရဲ့ ဖခင် ရော်ဂျာက အွန်လိုင်းပေါ် တင်လိုက်ပြီး သူ့သားကို သူ့အ်ိမ်က
ကြောင်က ကယ် တင် လိုက်တဲ့ အကြောင်း ညွှန်းဆိုရေးထားခဲ့တာပါ။
ဂျယ်ရမီကတော့ ခွေးကိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးကုသမှုတော့ ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ ကို ကိုက်တဲ့ ခွေးကတော့ အခု စောင့်ကြည့်ထိမ်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။
5/16/2014 02:03:00 AM Myanmar-news
“ဒီလို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြောကြတာကို ရပ်တန်းက ရပ်စေချင်ပါတယ်” လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောကြောင်း ရေးထားတဲ့ သတင်း အပြည့်အစုံကို ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ရွှေမောဓော ဘုရားရင်ပြင်ပေါ် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့၏ ကားများ တက်ရောက်မှု၊ ဘုရားပေါ်တွင် ဖိနပ်စီးမှု စသည့် သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ရန် ရွှေမော်ဓော ဂေါပကမှတာဝန်ရှိသူများကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းမောင်က “အဲဒီ သတင်းက အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ပြင်ပေါ်အထိ ကားတွေ တက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းအောင် ပြောရရင်
လျှောက်လမ်းကနေ လျှောက်တာပါ” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဂေါပက အတွင်းရေးမှူး ဦးကြည်ဝင်း ကလည်း “၀န်ကြီးချုပ်တို့က ကားပါကင်မှာ ရပ်ပြီး စေတီ ရင်ပြင်တော်ကို ခြေလျင်ပတ်တက်တာပါ။ ဒီနှစ် ၀န်ကြီးတွေရော၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ တော်တော်များများ လာကြ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကားများသွားပြီး တန်းစီသလို ဖြစ်သွားတာပါ။ ၀န်ကြီးချုပ်ကား ပြန်အဆင်းမှာ ရှင်းလောင်း လှည့်လာတာကို တွေ့လို့ ဦးစား ပေးလိုက်တော့ ကားတွေက တန်းစီသလို ဖြစ်သွားတာပါ။ သက်ကြီး ရွယ်အို လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ဂေါပကရုံး ရှေ့မှာ ကားခဏ ရပ်နားထားဖို့ ခွင့်ပြု ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ကားတွေက
ကျောက်ပန်းတောင်း ဓမ္မာရုံရှေ့မှာ ကားကြပ်နေလို့ ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ။ ကျန်အချိန်တွေမှာ ကားမ၀င်ရဆိုပြီး ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂေါပကကို သတင်းပို့တဲ့အခါ ဥပမာ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တွေ လာမယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။ ကားနဲ့စေတီတော်ရင်ပြင်အထိ တက်တယ်လို့ အင်တာ နက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတာ တကယ်ကို ကြားလို့ မကောင်းပါဘူး။ အကြောင်းအရာကို သေချာမသိတဲ့ ပြည်သူတွေက အထင်လွဲကြမှာပေါ့၊ ဒီလို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြောကြတာကို ရပ်တန်းက ရပ်စေချင်ပါတယ် ” ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
ကိုဇော်ဖေလွတ်မြောက်ရေး ဘားမားကင်ပိန်း ယူကေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု
5/15/2014 07:58:00 PM celebrity-news political-news
ကိုဇော်ဖေနဲ့ မိသားစု၊ ဓာတ်ပုံ- DVB
ဖမ်းဆီးထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗြိတိန်အခြေ စိုက် ဘားမား ကင်ပိန်း ယူကေအဖွဲ့က ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ီလျံဟေ့ဂ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်း ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေနဲ့ ကျောင်းသားမိဘတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့ဟာ မကွေးတိုင်း ပညာရေးဋ္ဌာန ကို သွားရောက်ကာ သတင်းအတည်ပြုချက်ရရေး မေးမြန်းဖို့ သွားတာကို ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပြီး တာဝန်ဝတ္တရား နှောက် ယှက်မှုနဲ့ စွပ်စွဲပြီး သူတို့ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇော်ဖေနဲ့ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့က ဒေသဆိုင်ရာ တရားရုံးက အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး သရက်အကျဉ်းထောင်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို သတင်းထောက်ကို ဖမ်းဆီးတာ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘားမား ကင်ပိန်း ယူကေက ဗြိတိန်ပြည်သူတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးထောက်ခံသူတွေဟာ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဋ္ဌာနကို စာ ရေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းထောက်တွေဖမ်းဆီးတာနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ပြန် လွှတ်ပေး
ရေးငြင်းဆိုနေတာတွေ အပေါ် မေးခွန်းထုတ်ဖို့နဲ့ ဗြိတိန်အစိုးရက မြန်မာအစိုးရကို နိုင်ငံရေး၊ နည်းပညာအရ အကူအညီပေးနေမှု၊ ငွေကြေး အကူအညီပေးနေမှုတွေကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဗြိတိန်အစိုးရဟာ မြန်မာအစိုးရကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ ဒေါ်လာ ၃၄ သန်း လျာထားတယ်လို့လည်း ဘားမား ကင်ပိန်း ယူကေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အသက် ၄၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ဖေဟာ ၂ နှစ်အရွယ်သားတဦးနဲ့ ဇနီးတို့ ရှိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကတည်းက သတင်း ထောက်လုပ်ရင်းအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်သလို ကိုဇော်ဖေဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကလည်း တရားမ၀င် ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးမှုနဲ့ ထောင် ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကား ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကမှ ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ အဲဒီကြေညာချက် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကို ဘာကြောင့် အမျိုးသား သစ္စာဖောက်လို့ သတ်မှတ်တာလဲ မသိဘူး
5/14/2014 09:10:00 PM articles Myanmar-news political-news
ရန်ကုန်တိုင်း သံလျင်မြို့နယ်အတွင်း ကျင်းပသော အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး ၉၆၉ တရားပွဲ တခု။(ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မျိုးစောင့်ဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်း အပေါ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကန့်ကွက်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က အမျိုးသားရေး သစ္စာဖောက်သူများဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချိန်၊ နေရာနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် မရွေး ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့် ရှောက်ရေး အဖွဲ့၏ မေ ၉ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသား ထားသည်။
အမျိုးသမီး အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၉၀ ကျော် က မေလ ၅ ရက်က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်၍ မျိုးစောင့် ဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်း အပေါ် ကန့်ကွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်တိုး အဖွဲ့များနှင့် ဆိုလျှင် ကန့်ကွက်သည့် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၃၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကန့်ကွက်သည့် အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်သော လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသော Equality Myanmar မှ ဦးအောင်မျိုးမင်းက“ကျနော်တို့ ကို ဘာကြောင့် အမျိုးသား သစ္စာဖောက်လို့ သတ်မှတ်တာလဲ မသိဘူး။ ကျနော်တို့ အခုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စက အမျိုးဘာသာ သာသနာ
ကို သစ္စာဖောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ဧရာဝတီ သို့ပြောသည်။
ယခု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့၊ သမ္မတ စသည့် သက်ဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပွင့် လင်း စွာပြောဆို သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တွေ့ဆုံရန်လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောဆိုသည်။
“မကြာမီမှာ ဥပဒေ ထွက်လာတော့မယ် ဆိုတော့ ကျနော်တို့တွေ ပိုပြီး ဆွေးနွေးဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ မျိုးစောင့်ဥပဒေမှာ ဘယ်လိုမျိုးတွေပါမယ်။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်နေတာလဲဆိုတာ သိမယ်။ အခု ကျနော်တို့ ဒီဟာကို လေ့လာထားတာပဲ ရှိသေးတယ်။ အခက်အခဲတော့ ရှိတာပေါ့”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေ မူကြမ်းရေးဆွဲရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရဟန်း သံဃာ ပညာရှင်များကို အကြံဉာဏ်များ တောင်းခံ ထားကြောင်း၊ ယခုလအတွင်း မူကြမ်းထွက်ရန်လည်း ရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးဝီရသူက ဧရာဝတီသို့ မိန့်ကြားသည်။
“မျိုးစောင့်ဥပဒေက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေကို ကယ်ဖို့နဲ့ အခွင့််အရေး ဘယ်တော့မှ မဆုံးရှုံးဖို့ပါ”ဟု လည်း ဆရာတော် ဦးဝီရသူ က မိန့်သည်။
ထိုဥပဒေ ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ကို ပြည်သူ့ လက်မှတ်ပေါင်း လေးသန်းကျော် တင်ပြခဲ့ပြီး ယင်း ဥပဒေ တွင် အဓိကအားဖြင့် ဘာသာကူးပြောင်းခြင်း၊ တလင်တမယား စနစ်ကျင့်သုံးရေး ဥပဒေ၊ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေ နှင့် လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်း ထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေ မူကြမ်းရေးဆွဲရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက် ထားသည့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၁၃၁ ဖွဲ့က အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး သဘောတူစာချုပ် (စီဒေါ) သဘော တူညီချက်ပါ အခြေခံများနှင့်အညီ ကျား၊မ တန်းတူ ညီမျှ ဖော်ဆောင်ရန်၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံသဘောတရားများ ပြည့်ဝသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တရပ် ကို ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍနှင့် ငြိမ်းချမ်း မှု တည်ဆောက်ရေးဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မှန် ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျမတို့က ဥပဒေပြုနိုင်တဲ့ အာဏာမရှိသလို လူမှုရေးလုပ်နေတာ ဖြစ်တာကြောင့် ထောက်ခံလက်မှတ် သန်းချီကောက်ဖို့ လုပ်ငန်း မျိုးဖြစ်စေ၊ တခြားစည်းရုံးရေးတွေ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာကိုလည်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ လှည့်ကွက်တခုလို့လည်း မြင် တယ်။ ဒီလို အရင်းအမြစ်များများနဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်နေနိုင်တာက နောက်ကွယ်က ဘယ်သူပံ့ပိုးပေးနေသလဲပေါ့”ဟု ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက် (Gender Equality Network) မှ မမေစံပယ်ဖြူ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေရေးဆွဲရေး အပါအဝင် ဘာသာရေးကို အခြေခံသော နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပြည်သူလူထုကို အာရုံလွှဲသော ကိစ္စရပ်များထဲမှ တခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအများစု လိုလားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး နှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား အဟန့်အတား ဖြစ်စေပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းမှု အရှိန်ကို နှောင့်နှေးစေကြောင်း မေလ ၅ ရက်က အမျိုးသမီး အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက် လူ့မှုအဖွဲ့အစည်း ၉၇ အဖွဲ့ ၏ ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
5/13/2014 12:53:00 AM celebrity-news
အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ဘယ်သူ့ကိုမှန်း မသိ လွမ်းဆွတ်နေမိတဲ့အကြောင်း သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
5/12/2014 06:23:00 PM celebrity-news
အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ ကလီယို ပါထရာ ဆိုတဲ့ တေးစီးရီးသစ် လက်မှတ်ရေးထိုး ဖျော်ဖြေပွဲကို လာမယ့် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်
ကလီယို ပါထရာ ဖြစ်သွားတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ အဲဒီ လက်မှတ်ရေးထိုး ဖျော်ဖြေပွဲကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီက ၈ နာရီထိ Junction Square မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ စန္ဒီမြင့်လွင်က သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ အသိပေးထားပါတယ်။
စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ ချစ်နေတုန်းပဲ ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းဟောင်းလေးကိုတော့ ပရိသတ်က စွဲမက်ခဲ့ပါတယ်။
အခု အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကလီယိုပါထရာကိုလည်း ဘယ်လို သီဆိုဖျော်ဖြေထားတယ်ဆိုတာ လာမယ့် လဆန်းဆိုရင် ဧရာဝတီပရိသတ်လည်း သိရပါတော့မယ်။
အခုတော့ တချိန်က ချစ်နေတုန်းပဲ ဆိုတာလေးကို နားဆင်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။
5/12/2014 06:22:00 PM celebrity-news
နန်းသီရိမောင်က သူဟာ ကား ထိခိုက်မှု မရှိခဲ့ပါဘဲ ဂျာနယ်တခုက အဲဒီလိုရေးသားခဲ့လို့ အခုလို တုံ့ပြန်ရေး သား ထားပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေလည်း သတိပြု ဆင်ခြင်စရာတွေဖြစ်လို့ နန်းသီရီမောင် ရေးသားထားတဲ့ အတိုင်း သင်ခန်းစာတခုအဖြစ် ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
Media နဲ့ အနုပနညာရှင်တွေက ကိုင်းကျွန်းမီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ပါ..
သမီးကိုအဆက်အသွယ်မရပဲနဲ့ interview မလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ သမီးမဖြေခဲ့ပဲနဲ့ရေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို ကာယကံ ရှင်ကပဲ အသိစိတ်နဲ့တာဝန်ယူပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်
သမီးဘ၀မှာ မဟုတ်စကားတွေကို အဟုတ်လုပ်ပြီးပြော စာတွေသတင်းတွေလုပ်ကြံရေး ဗလောင်းဗလဲ လုပ်တာကို အရမ်းမုန်းလို့ပါ..
မန္တလေး အာရုံဦး ဂျာနယ်ရှိတာဝန်ရှိသူများရှင့်
သမီးinterview မဖြေပဲ Facebook က လက်မတော်တစ ဒဏ်ရာရထားပြီး ကားစီယာတိုင်ပေါ်လက်တင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို Car Accident ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီးသတင်းအမှားကိုအမှန်လုပ်ပြီးရေသားထားမှုအပေါ် လူကြီးလူကောင်းပီသ ယဉ်ကျေးစွာ တာဝန်သိသိဖြေရှင်းပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်…
တစ်ခြားဂျာနယ်တွေမှာလည်း ကျွန်မလက်မတော်တစဒဏ်ရာရမှုကို interview ဖြေထားပေးပါတယ်ရှင့်…
ကျွန်မph ဆက်တော့ ph ကိုချပြစ်တာတွေ မအားလို့နောက်မှပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောတာတွေ ကိုယ်လုပ်မိတဲ့ အမှားကို ခေါင်းရှောင်တာတွေဟာ လူသားမဆန်ဘူးလို့သိထားတဲ့အတွက် လူကြီးလူကောင်းမပီသဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
သတင်းကိုပြန်လည်ပြီးအချိန်မီမပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် အမှားသိပြီး ကျွန်မကို “တောင်း ပန် ပါ တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးလုံး နဲ့အချိန်မီတောင်းပန်ရင် ကျေနပ်ခေါင်းငုံ့ခံမဲ့ ကျွန်မပါ..
တဆက်တည်း ကြုံတုံးလေး နန်းသီရိမောင် ရဲ့ မော်ဒယ်ဓာတ်ပုံ ဘယ်လို ပို့စ် ပေးရသလဲ ဆိုတာ သူတင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကလစ်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
5/11/2014 08:31:00 AM articles
ကလေးများရဲ့ အနာဂတ်ဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကလေးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းဟာ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို ပုံသွင်းခြင်းတခုပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကလေးများဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက် သိပ်ကိုမှ အရေးကြီးတဲ့သူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများ စိတ်ရည်၊ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားဖို့၊ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တွေ ရှိစေဖို့၊ လူကြီးလူကောင်းစိတ်တွေ မွေးတတ်စေဖို့အတွက် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကလေးတို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
စည်းကမ်းရှိတဲ့၊ တာဝန်ယူတတ်တဲ့၊ စာနာ နားလည်တတ်တဲ့၊ ကိုယ့်အမှားကိုယ် တာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး တခု ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက် ကလေးတို့နဲ့ နီးစပ်သူ ဆရာ၊ ဆရာမ တိုင်း၊ ဆွေမျိုး မိဘတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။
ကျမတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူကြီးနေရာမှာ နေနေကြပေမယ့် လူကြီးမဆန်တဲ့သူတွေ၊ အမှားကို ဝန်မခံဘဲ ရှောင်လွှဲတတ်တဲ့ လူတွေ၊ မျက်နှာလိုက် တတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ၊ သူများစကားကို နားမထောင်ဘဲ ကိုယ့်ဆန္ဒ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုသာ ဦးစားပေးတတ်တဲ့လူမျိုး တွေကို အများကြီး တွေ့နေကြရတာပါပဲ။ တွေ့မြင် တိုင်းလည်း စိတ်ပျက်မိကြရတာပါပဲ။ ဒီလို မယဉ် ကျေးတဲ့၊ ငါနဲ့ငါသာနှိုင်းစရာဆိုတဲ့ လူတွေ အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့စည်းမှာ နည်းပါးသွားစေဖို့အတွက် အနာဂတ်မှာ လူကြီးဖြစ်လာမယ့် ကျမတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ထိန်းကျောင်း လေ့ကျင့်သင် ကြားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အိမ်ထောင်စု တော်တော်များများက သား သမီးများနဲ့ မိဘ ဆက်ဆံရေးများကို လေ့လာကြည့် မယ်ဆိုရင်ဖြင့် သားသမီးနဲ့မိဘတို့ ဆက်ဆံရေးများ ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး သိပ်မရှိကြတာ များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖြင့် အဖေနဲ့ သားသမီးများဟာ မရင်းနှီးကြပါဘူး။ အဖေ က ပြောစရာရှိတာ (အမိန့်ပေးစရာရှိတာ) ကိုသာ ပြောပါတယ်။ သားသမီးရဲ့ ခံစားချက်၊ သားသမီး ပြောချင်တဲ့ စကား၊ သူကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခက်အခဲ စတာတွေကို အချိန်ပေးပြီးတော့ နားထောင်တာမျိုး သိပ်မရှိလှပါဘူး။ သားသမီး ပြောချင်တာကို အချိန် ပေးပြီးတော့ နားထောင်ခြင်းဟာ ကလေးတယောက် ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် အင်မတန်မှ လွယ်ကူပါတယ်။
ကလေး ဘာဖြစ်နေလဲ၊ ဘာခံစားနေရလဲ၊ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေရှိနေလဲ၊ ဘာတွေကို ကျေနပ်ပြီးတော့၊ ဘာတွေကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ကို မိဘက အချိန်ပေးပြီးတော့ ဂရုတစိုက်နားထောင် ဖို့ လိုပါတယ်။ မိဘဆူမှာကို မကြောက်ရဘဲနဲ့ သူ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆို ရင်ဖွင့်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးတို့ရဲ့ ခံစားချက် (စိတ်တိုတာ၊ ဝမ်းနည်းတာ၊ ပျော်တာ၊ အားငယ်တာ) စတာတွေကို မိဘကို လာပြောပြတဲ့ အခါမျိုးမှာ သူ့ခံစားချက်များကို ကိုယ်ချင်းစာနာမှု အပြည့်နဲ့ သေသေချာချာ နားထောင် ပေးရပါ မယ်။
“ဒါကို ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပါလားကွ” စသဖြင့် ကလေးကို အပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့စကားမျိုးတွေ လုံးဝ မပြောရပါဘူး။
ကလေးရဲ့ ခံစားချက်ကို လေးလေးစားစား နားထောင်ပေးရပါမယ်။ ကလေးက ကိုယ်လက်မခံနိုင်တဲ့ အပြုအမူ တခုခုကို လုပ်လာမိတယ် ဆိုရင် လည်း ကလေးကို ဘာမှမမေးမြန်းဘဲ အော်ဟစ်ဆူပူ လိုက်တာမျိုး မလုပ်ရ ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ် လာရသလဲဆိုတဲ့ ကလေးရင်ထဲက အကြောင်းရင်းကို သိအောင် မေးမြန်းရပါမယ်။
လူ့လောကမှာ ကိုယ့်ခံစားချက် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ မတူတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အမြင်တွေ၊ ရှုထောင့်တွေ ရှိသေးကြောင်း ကိုလည်း သူတို့လေးတွေကို သင်ပေး ရပါမယ်။ ကိုယ်က အနီရောင်ကြိုက်ပေမယ့် တဖက် လူက အပြာရောင် ကြိုက်နိုင်ကြောင်း၊ ကိုယ့်အတွက် အနီရောင်ဟာ အလှဆုံးအရောင်ဖြစ်ပေမယ့် တဖက် လူအတွက်တော့ အပြာရောင်ဟာ အလှဆုံးအရောင် ဖြစ်နေမှာပဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း ကလေး နားလည်အောင် ရှင်းပြပြော ဆိုရပါမယ်။
တဖက်သားရဲ့ စကားကို လေးလေးနက်နက် နားထောင်တတ်တဲ့အကျင့် ရစေဖို့အတွက် ကလေး က ကိုယ့်ကို စကားလာပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ သတင်း စာ ဖတ်နေရင်းတန်းလန်းနဲ့ နားထောင်နေတာမျိုး၊ ပန်းကန်ဆေးရင်း တန်းလန်းနဲ့ နားထောင်နေတာမျိုး၊ တီဗီကြည့်ရင်းတန်းလန်းနဲ့ နားထောင်နေတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။ ဖတ်နေတဲ့သတင်းစာ၊ ဆေးနေတဲ့ ပန်းကန်၊ ကြည့်နေတဲ့ တီဗီကို ခဏရပ်ပြီးတော့ ကလေးပြောတာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ သေသေချာချာ နားထောင်ပေးရမှာပါ။
တခါတလေမှာ ကလေးပြောတဲ့ စကားတွေထဲ မှာ ကိုယ့်အတွက် စိတ်တိုစရာ၊ စိတ်ဆိုးစရာ၊ လက် မခံ ချင်စရာတို့ ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် စိတ် တို၊ စိတ်ဆိုးပြီး ကလေးကို အော်ငေါက်လိုက်တာမျိုး လုံးဝ မလုပ်ရဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်(Emotion) ကိုထိန်းချုပ်ပြီး ကလေးပြောတာဆုံးတော့မှ ကလေး ကို အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြပြောဆိုသင့်ပါတယ်။
ကျမတို့လူကြီးတော်တော်များများဟာ ကလေး တွေ စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကလေးတွေ ပြောနေ တာပဲဆိုပြီးတော့ ဂရုတစိုက် နားထောင်လေ့ မရှိပါဘူး။ ကလေးပြောတာ မဆုံးသေးပေမယ့်လည်း ဖြတ်ပြော တာမျိုး၊ လုပြောတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ကြ ပါသေးတယ်။ အမှန်တော့ ဒါဟာ ကလေးကို လုပ် လိုက်တဲ့ ကိစ္စလေးဆိုပေမယ့် အင်မတန်မှ ရိုင်းတဲ့ အပြုအမူပါ။ ကလေးရှေ့မှာ ကလေးကို လုပ်လိုက် ခြင်းဟာ အဲဒီရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူတရပ်ကို လူကြီးက ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအနေနဲ့ ကလေးကို သင်ပေး လိုက်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ကလေးများဟာ လူကြီးလုပ်တာကို အတုခိုးပြီး တော့ လိုက်လုပ်တတ်ကြတဲ့ အမျိုးပါ။ ငယ်ငယ် ကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့စကားကို ဂရုတစိုက်နားထောင် တတ်တဲ့၊ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့ လူကြီးများနဲ့ ကြီး ပြင်းခွင့်ရတဲ့ ကလေးများဟာ ကြီပြင်းလာတဲ့ အချိန် မှာလည်း လူတဖက်သား စကားကို ဂရုတစိုက် နား ထောင်တတ်ကြ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိတတ်ကြပါတယ်။
လူတဖက်သားစကားကို နားထောင်တတ်တဲ့ လူများဟာ တဖက်သားရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း နား လည်နိုင်တာမို့ မှားယွင်းဆုံးဖြတ်တာလည်းနည်းတတ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ အဖွဲ့အစည်း တခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ့်သူများ ဟာ လူအများရဲ့အသံကို ဂရုတစိုက်နားထောင်တတ် တဲ့လူများ ဖြစ်ရ ပါမယ်။ ဘယ်သူ့အသံ၊ ဘယ်သူ့ စကားမှ နားမထောင်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တာ၊ ကိုယ် အမိန့်ပေးချင်တာကို ပြောဆိုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာမျိုးတွေ လုပ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ အမှားအယွင်း တွေ ရှိလာရစမြဲပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုမှာ တဖက်သားစကားကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နား ထောင်တတ်တဲ့၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့လူများ များစွာ လိုပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နားထောင်တတ်တဲ့၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့လူများ များပြားလာပြီဆိုရင်ဖြင့် ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူမျိုး တမျိုးအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ရဲ့ အနာဂတ်မှာ ယဉ် ကျေးတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတခု ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ အတွက် ကလေးများကို ငယ်စဉ်ကတည်းက လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်က အိမ်သာထဲတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် လိင်ဆက်ဆံသော အမျိုးသမီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရ
5/09/2014 04:31:00 PM world-news
Virgin လေယာဉ် တစီး၊ ဓာတ်ပုံ- The Mirror
အရက်မူးနေတဲ့ အသက် ၂၀ ကျော် ဗြိတိန်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ Virgin လေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ် တစီးပေါ်က အိမ်သာ ခန်းထဲမှာ အမျိုးသား တဦးနဲ့ မဖွယ်မရာ လုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းက အွန်လိုင်းမှာ ဟိုးလေး တကျော် ဖြစ်နေပါတယ်။
မိဘတွေနဲ့အတူ ဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ဟာ သူ့ဘေးက အမျိုးသား ကို မြူဆွယ်ခဲ့ပြီး သူတို့ ၂ ဦးဟာ လေယာဉ် အိမ်သာခန်းထဲ ဝင်သွားခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့မှ ဟိုလို ဒီလို အသံစုံတွေထွက်လာတော့ မှ လေယာဉ် အမှုထမ်းတွေက တံခါး အတွင်း တွန်းဖွင့်ပြီး အမျိုးသမီး ငယ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်လို့ မျက်မြင်တွေကို ကိုးကားပြီး The Mirror သတင်းတပုဒ် မှာ ဖော်ပြပါ တယ်။
အခု အဖြစ်အပျက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ London Gatwick ကနေ အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စု လာ ဗေးဂတ်စ် ကို သွားတဲ့ Virgin လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပါတဲ့။
လေယာဉ်စီးခရီးသည်တွေလည်း လေယာဉ်ပေါ်က အိမ်သာခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အသံတွေကြောင့်အတော် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေက အဆိုပါ ဆယ်ကျော်သက် ဗြိတိန်အမျိုးသမီး ကို
မေးမြန်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် Nevada resort မှာ အားလပ်ရက် လာအနားယူတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်ကို သတိပေးပြီး ပြန် လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းက ဆိုပါတယ်။
မျက်မြင်ခရီးသည်တဦးကတော့ တော်တော် သောင်းကျန်းတဲ့ မိန်းကလေးလို့ မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
တလောကလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းကို ဆင်းသက်တဲ့ Virgin လေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ် တစီးပေါ်မှာ အရက်မူးနေသူ တဦးရဲ့ လေယာဉ်မောင်း အခန်းကို ဝင်ဖို့ ကြိုးစားတာကို လေယာဉ် ပျံပေး ဆွဲတယ် အထင်မှားပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
ကျိန်စာတိုက်သူ သဲကုန်းလယ်သမားငါးဦးကို ပုဒ်မ၅ဝ၅(ခ)ဖြင့်ရုံးတင်
5/06/2014 09:49:00 PM Myanmar-news
ပြည်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက် နေသူများကို ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သည့် လယ်သမားငါးဦးကို ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင် သဲကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် မေလ(၆)ရက်က နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်အောင် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ၅ဝ၅(ခ)ဖြင့် ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု တရားဆွဲခံရသူများကပြောသည်။
“အသေဆိုးနဲ့ သေပါစေ၊ သားမယားကွဲပါစေ ဆိုပြီး ကျိန်စာတိုက်ခဲ့တယ်။ ပါဖောမန့်တစ်ခု အနေနဲ့လုပ်လိုက်တာ။ ဒါမှကမ္ဘာကသိမယ်” ဟုတရားဆွဲခံရသူ ကိုသန့်ဇင်ထက် က ပြောသည်။
ဧပြီလ(၁၁)ရက်တွင် သဲကုန်းမြို့အပြင်ဘက် ရွှေကြိုးပင်နတ်စင်၌ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူ သဲကုန်းမြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးအောင်၊ လယ်ယာမြေများတွင် ငါးကန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးထိုင်ထိုင်၊ သဲကုန်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ သဲကုန်းမြို့နယ် သမဦးစီးမှူးတို့အား လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခံရသူ လယ်သမားငါးဆယ်ကျော်က ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သူများဖြစ်သည့် သန့်ဇင်ထက် ၊ဒေါ်ညို ၊ ဒေါ်မုန်း ၊ ကိုပေါက်စ ၊ ကိုအောင်သူ တို့ငါးဦးကို သဲကုန်းမြို့နယ် လက်ထောက် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်မြင့်ထွေးက တရားလိုပြုလုပ်ကာ ဆွဲဆိုခဲ့သည်။ အမှုကို မြို့နယ်အထူးအာဏာရ တရားသူကြီးဦးဝင်းမြင့်က တာဝန်ယူစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး လယ်သမားများ ဘက်က တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးက လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည်ဟုလည်း တရားဆွဲခံရသူများကပြောသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးက “ဗမာ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းမှာလည်း မကျေနပ်တဲ့လူကို ကျိန်စာတိုက်တယ်ဆိုတာ ရှိတာပဲ။ အဲဒါနိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို မထိခိုက်ဘူး။ ဒီလိုတရားဆွဲတာ မမှန်ကြောင်း ဥပဒေနဲ့ မညီကြောင်း ရုံးတော်ကို လျှောက်လဲသွားမယ်” ဟုပြောသည်။
သဲကုန်းမြို့နယ် အောင်ကုန်းကျေးရွာမှ လယ်ယာမြေ (၁၁၅၉.၅၅)ဧကကို ၂ဝဝ၁ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်က သိမ်းယူခဲ့ပြီး အမှတ်(၃) လက်ကား သမဝါယမအသင်း လိမိတက်အမည်ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ငါးကန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
ယင်းလယ်များ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၁)ရက်တွင် တောင်သူများက သဲကုန်းမြို့ပေါ်တွင် သပိတ်စခန်းဖွင့် တောင်းဆိုခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄)ရက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖြိုခွဲခြင်းခံခဲ့ရပြီး ယခုလက်ရှိ အောင်ကုန်း ကျေးရွာ ဒေါ်မုန်း၏ နေအိမ်တွင် ယာယီသပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြလျှက်ရှိသည်။
ကျိန်စာတိုက်ပွဲအား သပိတ်စခန်း(၂)လပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဧပြီလ(၂၂)ရက်ကလည်း အောင်ကုန်းရွာ သုသာန်တွင် လယ်သိမ်းသူ အင်းမစစ်တပ်၊ လယ်ယာမြေအား လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူ ၊ လယ်ယာမြေနဲ့ အခြားမြေများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တို့အား ရည်စူးပြီး အခေါင်းသုံးခုကို မီးရှို့ခဲ့သေးသည်။
5/01/2014 07:11:00 AM celebrity-news
K- POP မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး လာရောက်ဖျော်ဖြေပွဲ ကို ဧပြီ၃၀ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်
ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ
ပုံအကြီးကြည့်ရန် ပုံပေါ်တွင် နှိပ်ပါ။
4/29/2014 04:57:00 PM crime-news
ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စုန်ခလာ ခရိုင် ဟတ်ယိုင်ဒေသမှာ ရဲက စုံစမ်းစစ်ဆေး မှု တွေကို ရက်သတ္တပတ်နဲ့ချီပြီး လုပ်နေခဲ့တယ်လို့ ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းတပုဒ်က ဖော်ပြပါတယ်။
အခုလို ဖမ်းဆီးရမိမှုဟာ ရာဇဝတ်မှု နှိမ်နင်းရေး ရဲဌာန၊ Siam Commercial Bank (SCB) ဘဏ်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ကြေး ရာဇဝတ်မှုကာကွယ်ရေး အဖွဲ့၊ ပြင်သစ်သံရုံး အရာရှိတဦးတို့ ပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် မှုကြောင့် ဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရဲအရာရှိကြီးတဦးက တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောတာမှာတော့ ဟတ်ယိုင်ဒေသမှာ ရှိတဲ့ Odeon Shopping Center ကုန်တိုက်အတွင်းက (SCB) ဘဏ်ရဲ့ ATM ငွေထုတ်စက်ကနေ ပထမဆုံး သံသယရှိသူ ၃ ဦးကို အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်နေစဉ်မှာ ဘတ်ငွေ ၅ သိန်းကို ထုတ်ယူခဲ့တာပါတဲ့။
ဒါနဲ့ ရဲပူးပေါင်း အဖွဲ့တွေက သူတို့ တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ် အပြင်ဘက်မှာပဲ သူတို့ကို တားဆီးလိုက်ပြီး ရှာဖွေ လိုက် တော့ ခရက်ဒစ်ကတ်အတု ၇၃၂ ခုနဲ့ အတူ ခိုးယူထားတဲ့ ငွေတွေ Debit ကတ်တွေ၊ စကင်မာ ( Skimmer ) တခုနဲ့ ကွန်ပျူတာ တလုံးကို သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြင်သစ်သံရုံးက အရာရှိတဦးပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ အထူးသဖြင့် ငွေထုတ်ခိုးယူခံရ သူ အများ စု ဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တာကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ Data Center နှစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည်ဟု Telenor ပြောဆို
4/29/2014 12:44:00 PM mobile-phone-news Myanmar-news
ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတစ်ခု လည်ပတ်နိုင်ရန် အဓိကကျသည့် Data Center ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၌ နှစ်ခုတည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Telenor Myanmar ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
၎င်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့၌ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် Data Center ကိုယခုလ ၇ ရက်နေ့က မီဒီယာများနှင့် မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက် Data Center ကိုမန္တလေးမြို့၌ လာမည့်တစ်လအကြာ ကာလအတွင်း တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
Telenor Myanmar ၏အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် Data Center သည်ကမ္ဘာ၌ Telenor တည်ဆောက်ခဲ့သည့် Data Center များအနက် အကြီးမားဆုံးသော Data Center ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်ဖြင့် နှစ်လအတွင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည့် Data Center ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
Telenor သည် မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း ၁၀ သန်းမှစတင်၍ အကန့်အသတ်မရှိသော မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းများကို တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် Data Center မှထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်း မီဒီယာများကို ပြောဆိုခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း သန်း ၃၀ ကို တစ်ပြိုင်တည်း စတင်ရောင်းချပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့် Telenor သည် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တာဝါတိုင်ပေါင်း ၂၄၀၀ ကိုလည်း တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် တာဝါတိုင်ဧရိယာများအတွင်း အသံစနစ်နှင့် အင်တာနက်စနစ်များကို လျင်လျင်မြန်မြန်စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Telenor က လက်တွေ့စမ်းသပ်
ပြသခဲ့သည်။ ၎င်း၏ Core Network ကို Huawei ကတည်ဆောက် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို Ericsson နှင့် Wipro တို့ကဖြည့်ဆည်း ပေးထားသည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် Apollo Towers နှင့် Irrawaddy Green Technology တို့သည် Telenor ၏တာဝါတိုင်တည်ဆောက်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Telenor ၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် Ooredoo သည် ၎င်း၏မိုဘိုင်းဖုန်း ကွန်ရက်အတွင်း အသံပေးပို့ခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကို အောင်မြင်စွာစမ်းသပ် နိုင်ခဲ့သည်ဟု မတ်လပထမ အပတ်ကကြေညာခဲ့သည်။
4/28/2014 09:01:00 PM korea-news
တောင်ကိုရီးယား ဖယ်ရီသင်္ဘောနစ်မြုပ်နေစဉ်၊ ဓာတ်ပုံ- ရိုက်တာ
အွန်လိုင်း ပရိသတ်တွေ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ အလွန် ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် တောင်ကိုရီးယားက ကူးတို့ သင်္ဘော မှောက်ပြီး ပင်လယ်ထဲ နစ်မြုပ် သွားတဲ့ သတင်းနောက်ဆက်တွဲတွေထဲမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စား
လေးစား အတုယူဖွယ်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထူးခြားဆုံး သတင်းဖြစ်မယ်ထင်တာကတော့ လူ အနည်းဆုံး ၃၀၀ ကျော် သေ ဆုံးတာ၊ ဒါမှ မဟုတ် ပျောက်ဆုံးတဲ့ သင်္ဘောမှောက်တဲ့ ကိစ္စ တောင်ကိုးရီးယားအစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်မှု ကို
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသား တွေ က အတော်မကျေမနပ်ဖြစ်နေတောတွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ချန်ဟွန်ဝွန်း က မနေ့တုန်းက ရာထူးက နုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ရုပ်/သံက ပြော သွားပါတယ်။
“အစိုးရအဖွဲ့မှာ ကျနော် ဆက်ရှိနေသေးမယ်ဆိုရင် ကျနော့်ကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး
ဖြစ်နေမယ်” လို့ သူက ရဲရဲ ရင့်ရင့် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာလည်း သမ္မတဆီကို သူက နုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား သတင်းတွေ က ဖော် ပြကြပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့က တောင်ကိုရီးယား ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေ ရာနဲ့ချီတင်ဆောင်သွားတဲ့ တန်ချိန် ၇ ထောင် လောက်ရှိတဲ့ ကူးတို့ သင်္ဘောဟာ အပန်းဖြေစခန်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးပြီး အလွန်လှပတဲ့ ဂျီဂျူးကျွန်း ကို သွားနေခိုက် တိမ်းမှောက်ပြီး ၂ နာရီ အကြာ နစ်မြုပ်သွားလို့ သင်္ဘောပေါ် လူပေါင်း ၃၀၀ လောက် ပါ သွားခဲ့ရပါတယ်။
သင်္ဘောနစ်မြုပ်နေချိန်မှာလည်း ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ တောင်ကိုရီးယား ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက အားသွန်ခွန် စိုက် ကြိုးစားကယ်ဆယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုထိလည်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ မပြီးသေး ဘူး လို့ ပြောရမှာပါ။
ဒါကြောင့် တောင်ကိုရီးယား ၀န်ကြီးချုပ် ချန်ဟွန်ဝန်းဟာ ကျောင်းသားအများစု သေဆုံး ( ပျောက်ဆုံး) ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် ဆိုး အပေါ် အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ အခင်းဖြစ်ကတည်းက အကြီးအကဲတဦးအနေနဲ့ ရာထူးကနုတ်ထွက်ချင်ခဲ့ တဲ့အကြောင်းလည်း ပြောပြီး တဖက်က ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင် မှုတွေကိုလည်း ရာထူးက နုတ်ထွက် ခွင့် မရမီ လုပ်ဆောင်သွားချင်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
တာဝန်ယူမှုရှိတတ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ လေးစားဖွယ်ရာပါ။ ( မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါမျိုး အိပ်မက် ပင် မမက်နိုင်သေးပါ)
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကတော့ ကယ်ဆယ်ရေး ကိစ္စတွေ မပြီးသတ်သေးတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ နုတ်ထွက်စာ ကို လက်ခံခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့က သစ်ပင်တပင်မှာ သင်္ဘောပေါ် ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ ပါသွားခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ခံ ခဲ့ရတဲ့ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ သူ့ကိုယ်သူ ခါးပတ်နဲ့ ဇွဲကြိုးချ သတ်သေထားတဲ့ အလောင်း ကို ရဲတွေ က တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
တိမ်းမှောက်နစ်မြုပ်သွားတဲ့ သင်္ဘောပေါ် စီးနင်းလိုက်ပါသွားကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ အတူ မိမိကိုယ် သေကြောင်း ကြံသွားတဲ့ ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး မစ္စတာ ခန်မင်ဂျူ လည်း အပါအ၀င်ပါဘဲ။
တကယ်တော့ သူဟာ သင်္ဘော နစ်မြုပ်နေစဉ်မှာ အခြား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ အတူ ပိတ် မိနေ ခဲ့ချိန် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့တွေက သူနဲ့ အခြား ကျောင်းသား ၇၅ ဦးကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့လို့ အသက်ရှင် ခဲ့ သူ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မသေဆုံးခင်က သင်္ဘောနစ်မြုပ်ချိန်က အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့မိတ်ဆွေတွေကို သတင်း ပို့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူဟာ ကယ်ဆယ်ခံခဲ့ရလို့ အသက်ရှင်ခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် အခုလို သူ့ကိုယ်သူ အဆုံး စီရင်သွား တာကတော့ သူ့ ကျောင်း သားတွေသေဆုံးသွားရတာအပေါ် အလွန်ဝမ်းနည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
သင်္ဘောပေါ် ပါသွားပြီး သေဆုံး ( ပျောက်ဆုံး) သွားရတဲ့ သူ့ကျောင်းသားတွေအတွက် အတော်ကြေကွဲ ခံစားရတဲ့ အကြောင်း ရေးသား ထားတဲ့ စာကိုလည်း သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက မှတ်တမ်းတခု မှာ ရေး ထားခဲ့တာကို ရဲတွေက တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒီအပြင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေနဲ့ သင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေထဲက ခေါင်းဆောင် စိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေ ကလည်း ကျောင်းသားငယ်တွေကို အသက်ကယ် အ၀တ် ရရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အသက်ပေးပြီး လုပ်ဆောင် သွားတာတွေလည်း သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရတယ်။
တာဝန်မဲ့တယ်လို့ ယူဆခံထားရတဲ့ အသက်ရှင်ပြီး လွတ်မြောက်လာတဲ့ သင်္ဘော ကပ္ပတိန်နဲ့ ၀န်ထမ်း တချို့ကိုတော့ အစိုးရက အရေးယူထားပါပြီ။
ဒီမှာ အဓိက သတိထားမိလိုက်တာက တောင်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ တာဝန်ယူမှု ပါဘဲ။ ဒီလို စိတ်ဓာတ်နဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေကပဲ တောင်ကိုရီးယားကို အခုလို ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် တဲ့
နိုင်ငံကြီးအဖြစ် မောင်းနှင် နေတာလားဆိုတာ လေးစားအတုယူဖွယ် ဖြစ်ရပါတယ်။
4/28/2014 09:00:00 PM Myanmar-news
သမတ အုိုဘားမား မလေးရှားနုိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ မြို့တော်ခန်းမတွင် အာဆီယံ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များကုို မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
“အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရကနေ အသွင်ကူးပြောင်းနေပြီ ဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရာအားလုံးကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပို၍ပို၍ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွန်စွာမှပင် ရဲရင့်လှတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို လျှောက်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
“ဒါပေမယ့်လည်း ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးရဲ့ အန္တရာယ်ဟာ အခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ လူမျိုးစုတွေ၊ မတူညီတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ တရားမျှတမှု၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဒါတွေကို စုစည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘာသာရေး အမှတ်သရုပ်တွေကို နိုင်ငံရေးသွတ်သွင်းမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးရေးအမှတ်သရုပ်တွေ ကို နိုင်ငံရေးသွတ် သွင်းကြမယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို လမ်းကြောင်းအမှားပေါ် ဆွဲချသွားစေနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ကျွန်တော် တို့ စမြင်နေရပါပြီ။”
“ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမှာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ မလေးရှားနိုင်ငံဟာဆိုရင် မူဆလင် လူများစု နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မူဆလင် မဟုတ်တဲ့သူတွေ ခွဲခြားခံနေရတာတွေ၊ မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို ရန်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရတာတွေ ရှိနေပါတယ်။”
“ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင် သမိုင်းနဲ့ချီတဲ့ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီး ဆင်နွှဲခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆင်နွှဲခဲ့ရပါတယ်။အာဖရိကန်နွယ်ဖွားသမ္မတတစ်ယောက် အဖြစ် ခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာ ရပ်လာနိုင်တဲ့ ယနေ့ အထိ မျိုးဆက် အဆက်ဆက် တိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအလုပ်က မပြီးသေးပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုပဲ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ၊ မမျှတမှုတွေ၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်ဖျက်နေရတုန်းပါပဲ။”
အထက်ပါ ပြောကြားချက်မှာ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၏ မလေးရှားရောက်ရှိစဉ် Town Hall Meeting ၌ အာဆီယံလူငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် အမေးအဖြေကဏ္ဍ၌ ရှင်းလင်းပြောကြားချက် ဖြစ်သည်
ပြောကြားချက်တစ်ခုလုံးကို လေ့လာကြည့်လျှင် ပဋိပက္ခများကို ခြုံငုံ၍ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် ပြောကြား သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသလို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာပြည်သူများ လက်မခံသော လူမျိုး အမည်ကို ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခြင်း မရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
အလားတူ အမေရိကန်သမိုင်း၌ ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသော ပြည်တွင်းစစ်၊ အသားအရောင် ခွဲခြားရေးပဋိပက္ခ စသည်တို့ကို မျိုးဆက်နှင့်ချီ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပုံကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွား ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
[အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အသားအရောင် ခွဲခြားမှု မည်မျှ ပြင်းထန်ခဲ့သနည်း ဆိုလျှင် လူမည်းများကို ပစ်မှတ်ထား၍ လူသတ်၊ ဗုံးခွဲ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ကေသုံးလုံးဂိုဏ်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆု ရရှိပြီးနောက် အသက် ပေးခဲ့ရသော မာတင်လူသာကင်း၊ လူမည်းများမဲပေးခွင့်၊ အမျိုးသမီးများ မဲပေးခွင့် စသည်အားဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြင်းထန်လှသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့သည်။]
ဘင်္ဂလီပြဿ နာနှင့် ပြည်တွင်းနေဘာသာခြားများ ကိစ္စကိုလည်း အရောရောအထွေးထွေး ရှုမြင်ထားပုံ ရကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရသည်။
ထိုသို့ ရောထွးရှုမြင်စေရန်လည်း မီဒီယာများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ အားက ကောင်း လှကြောင်း
အိုင်ယာလန်တစ်နိုင်ငံတည်းတွင်ပင်လျှင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသော အခြမ်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားသည့်ဘက်ခြမ်းမှာ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆက်အစပ်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ကြုံတွေ့လာရသော စိန်ခေါ်မှုများကို ယထာဘူတကျကျ ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
သို့သော် လက်ရှိ မီဒီယာအချို့က လိုသည့်အပိုင်းကိုသာ ဆွဲယူကောက်နှုတ်၍ ရေးသားဖော်ပြနေခြင်းသည် မီဒီယာအတတ်ဟု ဆိုနိုင်ပါကြောင်း မူရင်းပြောကြားချက် အပြည့်အစုံအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါသည်။
[University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia]
Now, that’s not unique to Myanmar. Here in Malaysia, this isamajority Muslim country. But then, there are times where those who are non-Muslims find themselves perhaps being disadvantaged or experiencing hostility. In the United States, obviously historically the biggest conflicts arose around race. And we had to fightacivil war and we had to haveacivil rights movement over the course of generations until I could stand before you asaPresident of African descent. (Applause.)
But of course, the job is not done. There is still discrimination and prejudice and ethnic conflict inside the United States that we have to be vigilant against.
Malaysia won’t succeed if non-Muslims don’t have opportunity. (Applause.)
Myanmar won’t succeed if the Muslim population is oppressed. No society is going to succeed if half your population — meaning women — aren’t getting the same education and employment opportunities as men.
So I think the key point for all of you, especially as young people, is you should embrace your culture. You should be proud of who you are and your background. And you should appreciate the differences in language and food. And how you worship God is going to be different, and those are things that you should be proud of. But it shouldn’t beatool to look down on somebody else. It shouldn’t beareason to discriminate.
That is the most important thing for this generation. And part of the way to do that is to be able to stand in other people’s shoes, see through their eyes. Almost every religion has within it the basic principle that I, asaChristian, understand from the teachings of Jesus. Do unto others as you would have them do unto you. Treat people the way you want to be treated. And if you’re not doing that and if society is not respecting that basic principle, then we’re going backwards instead of going forward.
[Source : http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/04/27/remarks-president-obama-young-southeast-asian-leaders-initiative-town-ha]
4/27/2014 08:04:00 AM political-news